Ithegi: aprimo | Martech Zone
I-Aprimo, iqonga lokuthengisa, libhengeze ukongezwa kwesoftware yolawulo lweeasethi ze-ADAM kwiminikelo yayo esekwe kwilifu. Iqonga liye lamkelwa njengenkokeli kwi-Forrester Wave ™: Ulawulo lweeasethi zedijithali kumava abaThengi, i-Q3 2016, ebonelela oku kulandelayo: Umdibaniso wendalo engenamthungo ngokusebenzisa i-Aprimo Integration Framework-Brands inokufumana ukubonakala okungcono kwaye inxibelelane ngakumbi ngaphandle komthungo kwindalo yentengiso. ngezibonelelo ezongeziweyo zesikhokelo sika-Aprimo esivulekileyo nesimanyanisiweyo sokudibanisa kwilifu. Ukudibana kweNtengiso
I-Aprimo: Ividiyo yeTekhnoloji yeNtengiso
NgoLwesine, uJanuwari 27, 2011 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Sonwabe kakhulu ukumilisela inyathelo elitsha ecaleni kweNcwadana yeNtengiso yeTekhnoloji kunye neNtengiso yeTekhnoloji yeRadiyo… sikwasungula uthotho lweVidiyo yeTekhnoloji yeNtengiso! Ukubanjwa kunye nokuveliswa yi-12 Stars Media, uthotho luya kukwazisa kwiinkampani zetekhnoloji ehamba phambili kunye nabantu abasemva kweemveliso kunye neenkonzo! Eyokuqala kuthotho lwethu ngu-Aprimo, inkampani ezenzekelayo yentengiso enezixhobo ezintsonkothileyo kubathengisi. Apha e-Indianapolis, sinayo
I-Aprimo: Izixhobo eziGqithisileyo zoThengiso oluHlanganisiweyo
NgoLwesithathu, Novemba 3, 2010 NgoLwesihlanu, Matshi 11, 2016 Douglas Karr
Kulo nyaka, sibona inkqubela phambili emangalisayo kumdibaniso womsebenzisi wabathengisi. Kunyaka ophelileyo ndaye ndadibana neqela lobunkokheli e-Aprimo emva kokuthetha no-Haresh Gangwani, i-VP yesiCwangciso seMveliso. Inkampani ibisandula ukutshintsha iigiye kwaye yaqala ukubonelela ngeSoftware njengenkqubo ye "Studio". Ndaziswa kwaye ndadibana ne-CEO yabo uBill Godfrey ixesha elide. Yayiyincoko engakholelekiyo malunga neNguquko yoThengiso… kwaye ngelishwa ndenze njalo
I-PHP: Zingaphi iintsuku kude kube yiKrisimesi?
NgoLwesibini, Novemba 6, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Sinomthengi okhethekileyo olungileyo kuphela kude kube yiKrisimesi kunye nokuseta kweentsuku kude kube kuphelelwa ngumhlaba ogcinwe kwindawo yogcino lwedatha. Ndidinga ukubhala umsebenzi wekron (umsebenzi ocwangcisiweyo) ohlaziya umhlaba kwindawo nganye yokutyela ngobusuku. Andizange ndibhale nayiphi na imisebenzi ye-cron ngaphambili-enkosi kwiqabane lam, Tim, e-Imavex ngokundikhokelela kwicala elilungileyo.